Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn | Kusuka kuLinux
Le ndatshana isibuyekezo se- Ubuntu 14.04 umhlahlandlela wokufaka ngemuva.
Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn wabona ukukhanya ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Njengoba senza ngokukhishwa ngakunye kwale distro ethandwayo, nazi ezinye izinto okufanele uzenze ngemuva kokwenza i ukufakwa zisuka nje.
1 1. Qalisa iMenenja Yokuvuselela
2 2. Faka ulimi lwaseSpain
3 3. Faka ama-codec, i-Flash, amafonti angeziwe, abashayeli, njll.
4 4. Faka ezinye izinqolobane
5 5. Faka amathuluzi osizo ukumisa Ubuntu
6 6. Faka izicelo zokucindezelwa
7 7. Faka ezinye izimenenja ze-package nezokumisa
8 8. Thola ezinye izinhlelo zokusebenza ku-Ubuntu Software Center
9 9. Shintsha isikhombimsebenzisi
10 10. Faka izinkomba nezinhlu ezisheshayo
11 11. Faka i-Compiz & plugins Configuration Manager
12 12. Susa imenyu yomhlaba
13 13. Susa ukusesha "kokuhweba" ku-Dash
14 14. Hlanganisa iwebhu kudeskithophu yakho
15 15. Umhlahlandlela we-Ubuntu Desktop
1. Qalisa iMenenja Yokuvuselela
Kungenzeka ukuthi ngemuva kokwethulwa kwe-Utopic Unicorn, izibuyekezo ezintsha sezivele ngamaphakeji ahlukahlukene isithombe se-ISO esisatshalaliswe yiCanonical eza nawo.
Ngalesi sizathu, ngemuva kokuqeda ukufakwa kuhlale kunconywa ukusebenzisa indlela ye- Buyekeza iMenenja. Ungakwenza ngokuyisesha ku-Dash noma ngokwenza okulandelayo kusuka ku-terminal:
Ukuvuselelwa kwe-sudo apt
2. Faka ulimi lwaseSpain
KuDash ngibhalile Ukuxhaswa Kwezilimi futhi ukusuka lapho uzokwazi ukwengeza ulimi oluthandayo.
Isichazamazwi ngeSpanishi seLibreOffice / OpenOffice
Uma kwenzeka ungenaso isihloli sokupela ngeSpanishi, kungenzeka ukukufaka ngesandla ngokulandelayo:
1. Iya ku Isikhungo sokwengeza seLibreOffice
2. Bheka i- Izichazamazwi Spanish
3. Landa isichazamazwi osithandayo (ngokujwayelekile noma ngokuqondene nezwe lakho)
Ngalokhu sizoba nefayela le-OXT. Uma kungenjalo, kuzofanela ushintshe ukunwetshwa kwefayela elilandiwe.
4. Vula i-LibreOffice / OpenOffice, khetha Amathuluzi> Izandiso bese uqhafaza Faka, siya enkombeni lapho kufakwe khona ifayela elilandiwe bese silifaka.
Ukubona umhlahlandlela ophelele ochaza ukuthi ungafaka kanjani isipelingi sokuhlola isipelingi nohlelo lolimi eLibreOffice / OpenOffice, ngiphakamisa ukuthi ngifunde lokhu okudala isihloko. Siphinde salungisa a umhlahlandlela ukufaka isihloli sokupela seSpanish kuFirefox / Chromium.
3. Faka ama-codec, i-Flash, amafonti angeziwe, abashayeli, njll.
Ngenxa yezinkinga zomthetho, Ubuntu abunakufaka ngokuzenzakalela uchungechunge lwamaphakeji, ngakolunye uhlangothi, adingeka kakhulu kunoma yimuphi umsebenzisi: ama-codec wokudlala ama-MP3, WMV noma ama-DVD abethelwe, imithombo eyengeziwe (esetshenziswa kakhulu ku-Windows), i-Flash, abashayeli abanikazi (ukusebenzisa kangcono imisebenzi ye-3D noma i-Wi-Fi), njll.
Ngenhlanhla, isifaki Ubuntu sikuvumela ukuthi ufake konke lokhu kusuka ekuqaleni. Kufanele unike amandla leyo nketho kwesinye sezikrini zesifaki.
Uma kwenzeka ungakakwenzi lokho, ungazifaka ngokulandelayo:
Umshayeli wekhadi levidiyo
Ubuntu kufanele ikuthole ngokuzenzakalela futhi ikuxwayise ngokutholakala kwamashayeli we-3D. Uma kunjalo, uzobona isithonjana sekhadi levidiyo kuphaneli ephezulu. Chofoza kuleso sithonjana bese ulandela imiyalo. Kungenzeka ukufaka abashayeli abaphathelene nabaphathi be- Udeshi> Amashayeli angeziwe.
Ama-codecs namafomethi wokuphathelene
Uma ungomunye walabo abangakwazi ukuhlala ngaphandle kokulalela i-MP3, M4A namanye amafomethi okuphathelene, futhi ubungeke uphile kuleli zwe elinonya ngaphandle kokukwazi ukudlala amavidiyo akho kuma-MP4, WMV nakwamanye amafomethi okuphathelene, kunesixazululo esilula kakhulu. Kumele uchofoze inkinobho engezansi:
Faka amakhosombe angavinjelwe
noma bhala esigungwini:
sudo kufanele ufake ukufakwa komuntu-okukhawulelwe-okungeziwe
Ukuze ubuke amanye amavidiyo futhi ubuke okuqukethwe kwe-flash web kusiphequluli sakho sewebhu, udinga ukufaka ifayela le- i-plugin ye-flash. Kungenzeka ukuyifaka ngqo kusuka ku-Software Center bese ufaka igama elithi "flash" noma kusuka ku-terminal ngomyalo olandelayo:
sudo apt-get ukufaka i-flashplugin-installer
Ukwengeza ukusekelwa kwe- Ama-DVD abetheliwe (konke "okwangempela"), ngivule ukuphela ngathayipha okulandelayo:
I-sudo efaka ukufaka i-libdvdread4 sudo / usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
4. Faka ezinye izinqolobane
Ngesikhathi sokubhala, amaphakheji we-Getdeb ne-Playdeb e-Ubuntu 14.10 ayengakatholakali.
I-GetDeb yiwebhusayithi lapho amaphakheji weDeb angafiki kumakhosombe ejwayelekile e-Ubuntu noma izinguqulo zamanje ezengeziwe ezitholakale lapho zenziwa futhi zitholakale kumsebenzisi wokugcina.
I-Playdeb, indawo yokugcina umdlalo ye-Ubuntu, yenziwe ngabantu abafanayo abasinike i-getdeb.net, inhloso yephrojekthi ukuhlinzeka abasebenzisi be-Ubuntu ngendawo engekho emthethweni ngezinguqulo zakamuva zemidlalo.
5. Faka amathuluzi osizo ukumisa Ubuntu
Ithuluzi elidume kakhulu lokumisa Ubuntu yi-Ubuntu Tweak (yize kufanelekile ukucacisa ukuthi ezinsukwini zamuva nje kubonakala sengathi ukuthuthuka kwayo kuzophela, okungenani ohlangothini lomdali wayo). Lesi simanga sikuvumela ukuthi "ushube" Ubuntu bakho bese ubushiya ngendlela othanda ngayo.
Ukufaka i-Ubuntu Tweak, ngivule ukuphela ngathayipha:
i-sudo engeza-apt-repository ppa: tualatrix / ppa sudo apt ukubuyekeza sudo apt ukufaka ubuntu-tweak
I-UnSettings iyithuluzi elisha lokwenza ngokwezifiso Ubuntu. Kunezinye izinhlelo ezinjengeMyUnity, iThuluzi le-Gnome Tweak, ne-Ubuntu-Tweak ezenza umsebenzi ofanayo, kepha lokhu kufaka ezinye izici ezihlukile.
i-sudo engeza-apt-repository ppa: idizili / ukuhlolwa sudo apt ukubuyekeza sudo apt ukufaka unsettings
6. Faka izicelo zokucindezelwa
Ukuze ucindezele futhi unciphise amafomethi athile akhululekile nawokuphathelene, udinga ukufaka amaphakheji alandelayo:
7. Faka ezinye izimenenja ze-package nezokumisa
I-Synaptic - Ithuluzi lokuqhafaza lokuphathwa kwephakeji okususelwa ku-GTK + ne-APT. I-Synaptic ikuvumela ukuthi ufake, uvuselele noma ukhiphe amaphakheji wohlelo ngendlela eguquguqukayo.
Akuvele kufakwe ngokuzenzakalela (njengoba besho ngesikhala kwi-CD)
Ukufaka: Sesha Isikhungo Sesoftware: i-synaptic. Ngaphandle kwalokho, ungafaka umyalo olandelayo ku-terminal ...
sudo apt ukufaka i-synaptic
ukufaneleka - Command ukufaka izicelo ezivela ukuphela
Akudingekile ngoba singahlala sisebenzisa umyalo "we-apt", kepha lapha ngiwushiya kulabo abawufunayo:
Ukufaka: Sesha Isikhungo Sesoftware: ukufaneleka. Ngaphandle kwalokho, ungafaka umyalo olandelayo ku-terminal ...
I-sudo apt ukufaka ukufaneleka
gdebi - Ukufakwa kwamaphakeji we-.deb
Akudingekile, ngoba lapho ufaka i-.deb ngokuchofoza kabili, iSoftware Center iyavula kepha ingahle ibe nentshisekelo kwabanye abantu abangathandeki.
Ukufaka: Sesha Isikhungo Sesoftware: gdebi. Ngaphandle kwalokho, ungafaka umyalo olandelayo ku-terminal ...
sudo ukufaka gdebi
Umhleli we-Dconf - Kungaba wusizo lapho ulungiselela iGnome.
Ukufaka: Sesha Isikhungo Sesoftware: umhleli we-dconf. Ngaphandle kwalokho, ungafaka umyalo olandelayo ku-terminal ...
I-sudo apt ukufaka i-dconf-tools
Ukuyisebenzisa, ngavula iDash ngathayipha "umhleli we-dconf."
8. Thola ezinye izinhlelo zokusebenza ku-Ubuntu Software Center
Uma ungatholi uhlelo lokwenza okufunayo noma ungazithandi izinhlelo zokusebenza eziza ngokuzenzakalela ku-Ubuntu, ungaya ku-Ubuntu Software Center.
Ukusuka lapho uzokwazi ukufaka izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu ngokuchofoza nje okumbalwa. Ezinye izinketho ezidumile yilezi:
I-OpenShot, umhleli wevidiyo
I-AbiWordUmhleli wombhalo olula, osindayo
Chromium, isiphequluli sewebhu (inguqulo yamahhala ye-Google Chrome)
I-XBMC, isikhungo semidiya
I-GIMP, umhleli wesithombe (uhlobo lwe-Photoshop)
9. Shintsha isikhombimsebenzisi
Ku-interface yendabuko ye-GNOME
Uma ungeyena umlandeli wobumbano futhi ufuna ukusebenzisa isikhombimsebenzisi sendabuko se-GNOME, sicela wenze okulandelayo:
Chofoza igama lakho lomsebenzisi
Bheka imenyu yeseshini ezansi kwesikrini
Shintsha kusuka ku-Ubuntu kuye ku-GNOME Flashback
Uma kwenzeka le nketho ingatholakali, zama ukusebenzisa umyalo olandelayo kuqala:
I-sudo apt ukufaka i-gnome-session-flashback
Uma ufuna ukuzama i-GNOME Shell esikhundleni se-Unity.
Ukufaka: faka umyalo olandelayo ku-terminal:
sudo apt-get ukufaka i-gnome-shell ubuntu-gnome-desktop
Isexwayiso: ukufaka i-GNOME Shell ngale ndlela kungenzeka kufake amanye amaphakheji we-GNOME ashiywe ngabafana be-Ubuntu. Isibonelo, uNautilus. Impela, mhlawumbe yilokho okufunayo, ngakho-ke uma kunjalo bekungeke kube nankinga kepha kufanele wazi ukuthi kungakulethela ikhanda elingaphezu kwelilodwa. Uma ufuna ukusebenzisa i-GNOME Shell, ngaphandle kokushiya Ubuntu, isincomo sami ukuzama ukusatshalaliswa okususelwe Ubuntu GNOME.
ICinammon imfoloko yeGnome 3 esetshenziswa futhi ithuthukiswe ngabadali beLinux Mint ekuvumela ukuthi ube nebha yomsebenzi ephansi ne-Start Start Menu yakudala.
sudo apt-get ukufaka isinamoni
Uma uthanda iCinnamon ne-Ubuntu kungaba ngumqondo omuhle ukuzama ukusatshalaliswa okususelwe I-Linux Mint.
I-MATE imfoloko yeGnome 2 eyavela njengenye indlela yabasebenzisi be-GNOME ngemuva koshintsho olukhulu olwenzeka kule ndawo yedeskithophu lapho isebenzisa iShell yayo eyimpikiswano. Ngokuyinhloko, i-MATE yi-GNOME 2, kepha bashintshe amagama amanye amaphakheji abo.
Indlela engcono yokuhlola i-MATE ukulanda ukusabalalisa okususelwe Ubuntu MATE. Ngale ndlela, ugwema noma iluphi uhlobo lwezinkinga lapho ufaka imvelo yedeskithophu oyithandayo.
10. Faka izinkomba nezinhlu ezisheshayo
Izinkomba - Ungafaka izinkomba eziningi, ezizovela kuphaneli ephezulu yedeskithophu yakho. Lezi zinkomba zingabonisa imininingwane ngezinto eziningi (isimo sezulu, izinzwa zehadiwe, i-ssh, ama-system monitors, i-dropbox, i-virtualbox, njll.).
Uhlu oluphelele lwezinkomba, kanye nencazelo emfushane yokufakwa kwazo, luyatholakala ku Buza Ubuntu.
Izinhla ezisheshayo - Izinhlu ezisheshayo zikuvumela ukuthi ufinyelele ekusebenzeni okuvamile kwezinhlelo zokusebenza. Zigijimisa ibha evela ngakwesobunxele kudeskithophu yakho.
Ubuntu isivele iza neziningana ezifakwe ngokuzenzakalela. Kodwa-ke, kungenzeka ukusebenzisa ezinye izinhlu ezisheshayo zenkambiso. Uhlu oluphelele, kanye nencazelo emfushane yokufakwa kwalo, luyatholakala ku Buza Ubuntu.
11. Faka i-Compiz & plugins Configuration Manager
UCompiz nguyena owenza lezo zinto zokubhala ezimangalisayo ezisishiya sonke singakwazi ukukhuluma. Ngeshwa Ubuntu abufiki nanoma yisiphi isikhombimsebenzisi sokuqhafaza ukulungisa i-Compiz. Futhi, ayizi nawo wonke ama-plugins afakiwe.
Ukuwafaka, ngavula ukuphela ngathayipha:
Sudo apt ukufaka compizconfig-izilungiselelo-umphathi compiz-plugins-extra
12. Susa imenyu yomhlaba
Ukususa okubizwa nge- "menu global", okwenza imenyu yezinhlelo zokusebenza ivele kuphaneli ephezulu yedeskithophu yakho, ngimane ngavula i-terminal ngathayipha okulandelayo:
I-sudo apt susa i-appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
Phuma bese ungena ngemvume futhi.
Ukubuyisa ushintsho, vula ukuphela bese ufaka:
I-sudo apt ukufaka i-appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
Amamenyu ewindi kwibha yesihloko
Ngaphambi kwalokho, amamenyu wezinhlelo zokusebenza angakhuliswanga nawo avela kwimenyu yomhlaba. Kodwa-ke, manje kungenzeka ukuthi amamenyu kulawa mawindi avele kubha yawo yesihloko. Ukuze wenze lokhu, kufanele uvule iDash, thayipha "Ukubukeka", iya kuthebhu ethi "Ukuziphatha" bese ukhetha inketho "Khombisa amamenyu ewindows kubha yesihloko."
13. Susa ukusesha "kokuhweba" ku-Dash
Ukukhubaza ukusesha okuku-inthanethi, ngivule ideshibhodi Amasethingi Esistimu> Ubumfihlo Nokuvikeleka> Sesha. Uma usulapho, khetha inketho "Faka imiphumela eku-inthanethi."
Ukuze usebenze kuphela usesho "lwezohwebo" oluvela ku-Dash, ungaya ku- Izicelo> Imiphumela Yokuhlunga> Uhlobo> Izandiso. Chofoza ku-plugin bese ukhetha Yenza kungasebenzi.
Ukukhubaza konke ukusesha kwe- "commercial" (i-Amazon, i-Ebay, i-Music Store, i-Popular Tracks Online, i-Skimlinks, i-Ubuntu One Music Search ne-Ubuntu Shop) ku-one swoop ungavula i-terminal bese wenza lo myalo olandelayo:
14. Hlanganisa iwebhu kudeskithophu yakho
Faka ama-akhawunti wakho wezokuxhumana
Ukuqala, ngithole ideshibhodi Amasethingi Esistimu> Ama-akhawunti Akwi-Inthanethi. Lapho usukhona, chofoza inkinobho ethi "Faka i-Akhawunti".
Izinsizakalo ezisekelwayo zifaka phakathi i-Aol, Windows Live, Twitter, Google, Yahoo!, Facebook (kanye ne-Facebook Chat), iFlickr, nezinye eziningi.
Izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa le datha Ukuzwela, iGwibber, neShotwell.
Ubuntu WebApps ivumela amawebhusayithi afana ne-Gmail, Grooveshark, i-Last.fm, i-Facebook, i-Google Amadokhumenti, namanye amaningi, ukuthi ahlangane ngokukhululekile nedeskithophu ye-Unity: ungasesha isayithi nge-HUD, uzothola izaziso zedeskithophu, izinhla ezisheshayo zizongezwa futhi izohlanganisa ngisho nemenyu yemilayezo nezaziso.
Ukuze uqalise kufanele uvakashele enye yezingosi ezisekelwayo (kunohlu oluphelele lapha) bese uchofoza ku- "ukufaka" okuzivelelayo, okuzovela njengoba kukhonjisiwe esithombeni esingenhla.
15. Umhlahlandlela we-Ubuntu Desktop
Akukho okudlula ukubheka imibhalo esemthethweni (ngeSpanish) ye-Ubuntu. Ilusizo oluhle kakhulu kwabasanda kufika futhi, ngaphezu kokuba banzi kakhulu, yabhalwa kucatshangelwa abasebenzisi abasha, ngakho-ke ilusizo kakhulu futhi ifundeka kalula.
Uzokwazi ukuthola ulwazi mayelana nokuthi yini entsha ku-Ubuntu nolwazi lokuthi ungasisebenzisa kanjani isiqalisi ukuqala izinhlelo zokusebenza (okungadida labo abangakaze basebenzise ubumbano), ukuthi ungasesha kanjani izinhlelo zokusebenza, amafayela, umculo nokunye okuningi nge-Dash, ukuthi ungaphatha kanjani izinhlelo zokusebenza nezilungiselelo ngebha yemenyu, ukuthi ungavala kanjani iseshini, ucime noma ushintshe abasebenzisi kanye ne-etcetera ende.
Iya kumhlahlandlela wedeskithophu we-Ubuntu 14.10
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn
Ngiyayithanda ngoba ingafingqwa ngokuthi "Manje faka i-Linux Mint." Kuza nakho konke ukwenze ku-Ubuntu esanda kufakwa.
Ubumbano oluncane… Haha…
"Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn"
- Khipha Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn…
Che, lokhu kugcwele ama-troll ... haha!
Cha, kepha le troll ikhethekile, ngiyayithanda le yingakho ngimvumela asho konke akushoyo .. futhi, uyi-Apple Fanboy, ngakho… 😛
U-Apple fanboy futhi usebenzisa i-win 8.1: /
mfana ndini kusho
worale ogcwele kakhulu isoftware yobunikazi kunomshini we-cyber lapho ngixhuma khona!
Phendula umfana ompofu
Isule ngokuphelele futhi ufake iMageia oo
(Ukugxeka okwakhayo KUVULIWE)
Bengilokhu ngilandela iwebhusayithi yakho isikhashana futhi ngikuthanda kakhulu okuthumele kepha, uma uzokwenza okokufundisa ku-versionitis yohlelo ngalunye, kufanele ukwenze nakwabanye futhi ungalahli imbongolo yakho ngohlobo ngalunye lwe-Ubuntu ngaphezulu ukuwasusa njalo ezinyangeni eziyisithupha, ngokweqile ngokwami ​​(ngiyacacisa, ngine-ElementaryOS Freya ne-OpenSUSE 6).
(Ukugxeka okwakhayo KUVALIWE)
Njengoba u- @ 3ndriago esho:
Isinyathelo 1: - Khipha Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn…
Isinyathelo 2: Faka i-14.04 yona kanye no-12.04 okungenye yezitebhisi abazuze kakhulu futhi i-Unity ayisasindi kangako: S
Ngiyaqonda futhi ngezinga elithile ngabelana ngombono wakho. Kodwa-ke, ngiyakuqinisekisa ukuthi abantu abaningi banentshisekelo kulolu hlobo lomhlahlandlela wenguqulo ngayinye ye-Ubuntu. Noma kunomehluko omncane phakathi kwenguqulo ngayinye, kwesinye isikhathi ushintsho alubi lincane njengoba umuntu ecabanga.
Nokho ... akuwona wonke umuntu ocabanga njengomunye futhi kufanele ubahloniphe labo bantu ... futhi ubasize. Futhi, cabanga ukuthi abantu abaningi baqala ngale nguqulo ye-Ubuntu (ngokuhle noma ngokubi).
Noma kunjalo, ngiyabonga ngokugxeka kwakho okwakhayo.
Yebo, kimi ngisebenzisa i-win 8.1, kepha ngithanda ukuchitha isikhathi ngifaka futhi ngisebenzise i-Linux, kulokhu inguqulo ngayinye ephuma ku-Ubuntu, ngiyazi ukuthi abaningi abayithandi, kepha okungenani inobungani lapho ufaka, Ngifakele i-openSUSE futhi kuvela ukuthi ayisebenzisi i-adaptha yenethiwekhi yami engenantambo ye-usb, engenzeki nge-ubuntu, angithandi ukuchitha isikhathi sami ngizama ukuxhuma kwi-inthanethi uma ngabe le nguqulo yeLinux (futhi nami yazi ukuthi kuzoba khona abanye) ake ngiyisebenzise.
Ngiyabonga ngebhukwana, lingisizile kakhulu, ukufaka izinto engizokusebenzisa nezinye ozozibona nje ungabe usazisebenzisa, kodwa icala USIZO futhi ngicabanga ukuthi uyafeza umsebenzi.
Ngiyayiqonda impendulo kaBla6. Kepha ukube bezingekho izincwadi zemihlahlandlela zazo zonke izibuyekezo, abasebenzisi abasha bebezoba nesikhathi esinzima. Ngibambeke kuLinux nge-Ubuntu 10.xx (angikhumbuli ngisho). Ukube bezingekho iziqondiso mhlawumbe ngabe kusencike kwiWindows; namuhla ngisebenza ngazo zombili futhi noma nini lapho ngikwazi ukukhetha no-Ubuntu.
Siyabonga ngomsebenzi wakho.
@ Bla6 khumbula ukuthi le bhulogi yomphakathi ngakho-ke uma ufuna le bhulogi ikhulume ngokunye ukwabiwa, ungakha i-akhawunti bese ushicilela i-athikili.
maqondana nendatshana; olandele ikhasi elidala usemoslinux.blogspot.com uzokwazi ukuthi ngenguqulo entsha ye-Ubuntu, @usemoslinux (Pablo) ukhipha inguqulo entsha yalesi sihloko eyikhophi elula nokunamathisela kwendatshana yenguqulo eyedlule ngokuncane ukuguqulwa ukuyivumelanisa nohlobo olusha ngokuthembeka angikubizi lokho ukulahlekelwa imbongolo yakho.
Mayelana nokubaluleka kwendatshana, ngizokutshela kuphela ukuthi ngaleso sikhathi, eminyakeni embalwa eyedlule le ndatshana ibibalulekile kimi futhi ngiyazi ukuthi ibenzelwe abaningi futhi isazoqhubeka nokuba ngeyabantu abasha abafika ku-Ubuntu.
Ukhuluma ngezinkomba, angibange ngisazikhumbula. Uyazi ukuthi ungazilungisa kanjani izinkomba onazo kubha? Ngiqonde ukuthi, vula eyodwa bese uyisebenzisa futhi, izinto ezinjalo.
Ngokwesinqumo sami, okungenani okwamanje nginqume ukunganamatheli ku-14.04 futhi ngingafaki i-14.10 ngoba ngokuya ngemininingwane yonke umehluko mncane. Ngingomunye walabo ekugcineni abangakwazi ukubamba kepha hey kulokhu ngicabanga kanjalo. Ngamafuphi, lokhu kokuqala ukukutshela ukuthi yize kukhona konke engicabanga ukuthi kuyisihloko esiphelele futhi esisebenzisekayo se: okufanele ukwenze ngemuva kokufaka ubuntu ... .. Siyakuhalalisela futhi ngaphezu kwakho konke ngiyabonga kakhulu.
Kubonakala kimi noma ngabe i -get ilahlekile ????
thola kahle ……
Ngibonga umhlahlandlela, kuyiqiniso ukuthi izikhathi zokuqala lapho ngiye ezweni le-linux lezi zinkomba zazingisize kakhulu, ngokuhamba kwesikhathi umuntu akaboni mqondo, kepha ngokuqinisekile kwabanye abaningi uma kunjalo.
Ukuqala ngo-Ubuntu 14.04, umphathi wephakethe we-apt ("Ithuluzi Lephakheji Elithuthukile") unezinketho ezintsha. Awusadingi ukuthayipha i- "apt-get" futhi ungavele usebenzise i- "apt", (apt isazosebenza).
Hahaha, uhlala ufunda okuthile okusha! Ukubingelela nokubonga
kuhle ukwazi. Ngicabanga ukuthi bangeze ama-alias ku .bashrc
Angibheki ubuntu njenge-gnu / linux distro, kubukeka njengamawindi kunangesikhathi lapho uthuthukela enguqulweni ephezulu konke kuya shit.
indoda okulula ukuyilungisa, ibuyekeze njalo eminyakeni emi-2 futhi yilokho kuphela. hlala ku-14.04 okuyi-support yesikhathi eside nokuvuselelwa ngo-Ephreli 2016 kuya ku-16.04. lokhu akusho ukuthi uzophelelwa izibuyekezo iminyaka engu-2 ngoba kuzohlala kunezibuyekezo zokuphepha, i-kernel nesoftware ethile efana ne-firefox abasebenzisi abafuna ukuyigcina ivuselelwa
Akukho lutho lapho, kuzofanele sibheke nge-virtualbox ukubona ukuthi kunjani
URicardo Montalbo kusho
Ngifuna ukuyifaka kwi-mac yami: D, ngabe kukhona okokufundisa?
Phendula uRicardo Montalbo
UMnu N kusho
Kukhona umthetho olandelwayo wesenzo odume kakhulu muva nje.
1. Bona ukuthi Ubuntu buzuzeni
2. Khipha / qala kabusha i-DVD ye-boot
3. Faka iLinux Mint.
Phendula uMnu N
wona 88 kusho
umsebenzi omuhle kakhulu.
Sawubona, faka le nguqulo nge-boot kusuka ku-USB, kunezikhathi lapho kunzima ukuqala khona kodwa ekugcineni ngikwazile ukufaka ngokuphelele, ngesikhathi sokuqalisa kabusha i-grub iqala, ngikhetha Ubuntu futhi isikrini esimnyama sihlala ngaphandle kokwenza noma yini. Yini engaba khona? Ngibe kanjena usuku.
Ngenye i-distro ngiphonsa iphutha le-ACPI noma into enjalo.
Okwezinsuku ezimbalwa senze ukuthi kutholakale insiza yombuzo nezimpendulo entsha ebizwa Buza KuLinux. Siphakamisa ukuthi udlulisele lolu hlobo lokubonisana lapho ukuze umphakathi wonke ukwazi ukukusiza enkingeni yakho.
Zama ukubeka igama elithi "ukuphuma" kungisebenzele, ngemuva kwalokho Ubuntu buqala ngaphandle kwezinkinga.
Yize kungaba elinye iphutha.
Futhi uTrisquel 7 uphumile! usale kahle Ubuntu!
U-Esteban Gimenez kusho
Bengilokhu ngisebenzisa Ubuntu 14.04 unyaka futhi bekungafanele ngifomathe i-PC yami nganoma isiphi isikhathi, bekungekho maphutha ohlelo noma i-PC yami iye yehla njengalapho ngisebenzisa iWindows 8, Ukubuyekeza ku-Ubuntu 14.10 kungaba okokuqala ngifomathile i-PC kulo nyaka, noma ingabuyekezwa kusuka kumphathi wokuvuselela?
Phendula u-Esteban Gimenez
Impendulo yombuzo wakho ilapha: http://ask.desdelinux.net/603/como-actualizar-ubuntu-14-04-a-ubuntu-14-10
Sincoma ukusebenzisa le sevisi (Buza Ku-Linux) ukwenza lolu hlobo lombuzo. 🙂
Ngiyethemba lolu lwazi lusizo.
Ngabe lokho empeleni umehluko mncane uma kungenjalo uziro. Mina "ononya" wokuvuselelwa kwe-ubuntu ngalesi sikhathi angikakwenzi futhi kwenye i-laptop ngifake i-14.10 ngqo futhi ngathi akukho okusha engikufakile. Ngicabanga ukuthi isibuyekezo sizongena ngaphakathi nezinto kodwa angikaze ngiqaphele cishe noma yini. Noma kunjalo, ngizothatha i-14.04. Ukubingelela.
Ngiyabona ukuthi isigaba sokuqhafaza asizange sithuthukiswe ngokuphelele (ngokuya ngabashayeli), ngakho-ke nansi umnikelo wami omncane walabo abanamakhadi we-hybrid nVidia / Intel.
I-Ahem ... Kukhona ukuqaliswa kwe-nVidia okubizwa nge-Optimus yamawindows umsebenzi wayo ukushintsha phakathi kwe-nVidia ne-Intel ihluzo ngesandla kanye / noma ngokuzenzakalela ngokuya ngesidingo semisebenzi. Yini evumela ilaptop ukuthi isebenze ibhethri cishe kabili, lapho ingadingeki kuzinsizakusebenza.
Ku-Linux kunokusetshenziswa okubili kwalobu buchwepheshe. Eyodwa ibizwa nge-bumblebee, okukuvumela ukuthi uhlomise uhlelo lokusebenza ngamandla wehluzo ze-nVidia, ngenkathi ngemuva iqhubeka nokusebenzisa ihluzo ze-Intel. Enye ibizwa ngokuthi yi-prime, ekuvumela ukuthi ukhethe ngokusebenzisa izilungiselelo ze-nvidia phakathi kwamaphrofayli ama-2 ongawasebenzisela iseshini ye-X server, iphrofayili eyodwa yi-nVidia kuphela, enye i-Intel kuphela. Le ndlela yokugcina ebizwa ngokuthi i-prime (* ebheke phambili ocingweni lwesithathu lwe-megatron *) kufanele iqashelwe ukuthi isebenza kuphela ku-Ubuntu futhi ilusizo kithina esenza zonke izinhlobo zobuqili ukwenza ibhethri lihlale isikhathi eside, yize ukusebenza kahle ungabi njengasemafasiteleni.
Uma lokhu kudonsela ukunaka kwanoma yiliphi iqembu elinentshisekelo elifisa ukufaka i- "prime", izinyathelo okufanele zilandelwe (Ubuntu 14.04 no-14.10).
2) Qala kabusha
3) i-lspci -vnn | grep -i VGA -A 12 // thola imodeli yegrafu yakho bese ubheka umshayeli wakho ku> http://www.nvidia.com/Download/index.aspx
4) i-sudo engeza-apt-repository ppa: xorg-edgers / ppa -y && sudo apt-get update // engeza amakhosombe
5) Faka umshayeli kusuka ku- "abashayeli abakhawulelwe" noma "abashayeli abengeziwe"
6) sudo apt-get ukufaka i-nvidia-prime
7) qala kabusha
8) Vula izilungiselelo ze-nvidia, esigabeni samaphrofayli khetha igrafu oyithandayo.
P.S. Uma ufuna ukusebenzisa i-Bumblebee, ngincoma ukuthi uzame i-manjaro distro, inethuluzi olicijayo ukuthi lifaka kalula kangakanani abashayeli abanobunikazi, ngaphandle kwalezo ezikhethekile ezinjengalezi ezivela ku-Ubuntu.
izindleko zokukhokha kusho
ngiyabonga ngosizo oluningi kwabangafundile ezinhlelweni futhi kulula
Phendula kuzindleko zokugoqa
wenze zonke izinyathelo ngiyabonga kakhulu!
UNicolas Soto kusho
Phendula uNicolas Soto
Ubuntu obuhle kakhulu
Ngiyabonga ngesifundo lapho ngithuthukisa ngithole lokhu? ISEXWAYISO: Ukweqa isitifiketi esiyimpinda yesitifiketi UbuntuOne-Go_Daddy_Class_2_CA.pem
I-Tooooooodo lokhu akudingekile neze uma sifaka windows.
Manje sengiku-Ubuntu 14.10 ngizama ukuthola ukuthi ngiguqula kanjani iFirefox ibe yiSpanish ngoba isuka kuFirefox efanayo Kokuthandwayo ayingithathi. Futhi-ke kufanele ngithole ukuthi ngingayishintsha kanjani ikhibhodi iye kusiLatin Spanish. Ngakho-ke angikwazi ukubhala ama-ennes noma ama-accents futhi i-Alt + 64 ayisebenzi ukubeka uphawu.
Ngizoqhubeka nokuhlola ... kepha iqiniso ukuthi, kuzoba nzima kakhulu ukunquma ngeLinux uma lezi zinto eziyisisekelo zingezi ne-OS futhi zithathe isikhathi esiningi.
Bekufanele ngikopishe i-imeyili ekhasini lewebhu ... ucabanga?
Ngicabanga ukuthi kungaba ngcono uma uphakamisa lo mbuzo enkonzweni yethu yemibuzo nezimpendulo ebizwa Buza KuLinux ukuze umphakathi wonke ukwazi ukukusiza enkingeni yakho.
Noma kunjalo, njengosizo, ngincoma ukuthi ubheke izixhumanisi ezilandelayo:
Ungashintsha kanjani ulimi lwe-Ubuntu (kufaka neFirefox): https://www.youtube.com/watch?v=PJyB-oY3CqE
Ungasishintsha kanjani isihloli sokupela kuFirefox: https://blog.desdelinux.net/firefoxchrome-como-habilitar-el-corrector-ortografico-en-espanol/
Ungasifaka kanjani isichazamazwi seSpanish kuLibreOffice: https://blog.desdelinux.net/firefoxchrome-como-habilitar-el-corrector-ortografico-en-espanol/
Ungayishintsha kanjani ikhibhodi ku-Ubuntu: http://ask.desdelinux.net/1102/elegir-distribucion-teclado-espanol-latinoamericano-ubuntu?show=1102#q1102
Ungayifaka kanjani ikhodi ye-ASCII ku-Ubuntu: http://ask.desdelinux.net/1042/como-ingresar-codigo-ascii-en-ubuntu-otras-distribuciones?show=1042#q1042
Sanibonani bantu! Ingabe ikhona indlela yokubeka isiqalisi sobumbano ezansi kwesikrini ku-Ubuntu 14.10? Ngiyabonga kusengaphambili futhi ungixolele ukungazi kwami.
oscar ascona kusho
Angazi kangako odabeni kepha ngiyabonga engikwenzile futhi ngikucela kuphela imininingwane eyengeziwe ngale ndaba ngendlela elula nenenhloso, ngiyakuhalalisela
Phendula ku-oscar ascona
HowTo: Faka iPlasma 5.2 ku-ArchLinux / Antergos + Amathiphu